अब देखि बसमा २ जना ड्राइभर राख्नै पर्ने, नराखे यस्तो हुने छ कारवाही ! – PanchKhal Online
Home/समाचार/अब देखि बसमा २ जना ड्राइभर राख्नै पर्ने, नराखे यस्तो हुने छ कारवाही !
अब देखि बसमा २ जना ड्राइभर राख्नै पर्ने, नराखे यस्तो हुने छ कारवाही !
लामो दूरीमा एक जनामात्र चालक हुँदा बस त्रिशुली नदीमा खसेर दुर्घटनामा परेपछि विभागले मंगलबार सूचना जारी गरी २ चालक हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको हो । लामो दूरीमा चल्ने गाडीमा दुई जना चालक भए/नभएको मुलुकभर अनुगमन गरिने विभागले जनाएको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
यो पनि पढ्नुहोस : ‘हाम्रो पूर्वाञ्चल अन्तर्राष्ट्रिय गोल्डकप’ असोज ११ देखिआगामी असोज ११ गतेदेखि १८ गतेसम्म झापाको बिर्तामोडस्थित डोमालाल राजवंशी रङ्गशालामा ‘हाम्रो पूर्वाञ्चल अन्तर्राष्ट्रिय गोल्डकप २०७६’ हुने भएको छ ।
बैदेशिक रोजगारीका लागि कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी हुन ३२ केन्द्र तोकियो ! तपाईको कुन केन्द्रमा ?